पाँच तारे होटलमा नेप्सेको अनलाइन प्रणाली उद्घाटन हुँदै गर्दा यता वेवसाइटको भने बिजोग !
ARCHIVE, OFF THE BEAT » पाँच तारे होटलमा नेप्सेको अनलाइन प्रणाली उद्घाटन हुँदै गर्दा यता वेवसाइटको भने बिजोग !
काठमाडौँ- काठमाडौँको एक पाँच तारे होटलमा नेप्सेको पूर्ण अनलाइन प्रणालीको उद्घाटन हुँदा यता लगानीकर्ताले हेर्ने वेव साइटमा भने समस्या देखिएको छ । यो समाचार तयार गर्दासम्म नेप्सेको वेवसाइटले काम गरिरहेको छैन । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले एक कार्यक्रमबीच अनलाइन प्रणालीको उद्घाटन गरेका हुन् ।
मोबाइल र कम्प्युटरबाट घर वा कार्यालयमै बसेर आफैंले सेयर कारोबार गर्न सक्ने भन्ने चर्चा चलेपनि हालका लागि ब्रोकरको हातमा मात्र पूर्ण अनलाइन आउनेछ । ब्रोकरहरु अभ्यस्त भइसकेपछि फेरि लगानीकर्ताको हातमा अनलाइन प्रणाली जाने नेप्सेले जनाएको छ ।
प्रकाशित : Tuesday, November 06, 2018